Yiba ngumthengisi? Qhagamshelana nathi: info@bulltech3d.com
Umshicileli we-SLA 3D
Umshicileli we-SLM 3D
I-United States Marines Sebenzisa i-AM yesiXhobo esitsha soLondolozo lweZithuthi
Kwakhona umkhosi waseMelika ujika kwimveliso eyongezelelweyo (i-AM) yezicelo ezitsha zokubanceda ebaleni. Ngeli xesha, iMarine Corps System Command's (MCSC) yeNkqubo yokuSebenza yoPhuculo oluPhambili (i-AMOC) incede ekuphuhliseni isixhobo sokususa ivili esinyithi se-3D ...
Izicelo zokuprinta i-3D kwiLizwe loMculo
Umhla wamashumi amabini ananye kuJuni yiFête de la Musique (ekwabizwa ngokuba yiWorld Music Day), umbhiyozo wamazwe aphesheya onika amagcisa ithuba lokuya ezitratweni ukubonisa italente yawo yomculo. Kwiminyaka yakutshanje kumzi mveliso womculo, ukushicilelwa kwe3D kubonise okunokwenzeka njengoko kubonelela ...
I-E-Scooter yokuqala yeHlabathi ye-3D eprintiweyo
I-E-scooter ibe sisihloko esinokuphikisana ukusukela oko kwaziswa kwizixeko ezikhulu. Izimvo zahlulwe, ngakumbi xa kufikwa kuzinzo. Ewe, i-e-scooter zinokuba zilungele indalo- ngakumbi ukuba zithatha indawo yohambo lwemoto okanye ezinye iindlela zothutho lukawonkewonke. Uphononongo olwenziwe ...
Iqela loPhando le-RMIT liphuhlisa indlela eNtsha yokuYila izinto zokuTyala zisebenzisa i-Bioprinting kunye ne-Injection Molding
Kwiziko iRoyal Melbourne Institute of Technology (RMIT University), iqela labaphandi, kunye noogqirha besibhedlele iSt Vincent's eMelbourne, baphuhlise indlela entsha yokuprinta ukufakelwa kwezonyango. Endaweni yokuyila iselfowuni apho iiseli ziya kuphinda-phinda, zishicilelwe nge-3D ...
USakuu ubhengeza ukumiselwa kwePlatifomu yayo yokuPrinta ye3D yokwenza iiBhetri zoMbuso eziQinisekileyo
Ngaba unokucinga ngeqonga le-AM elinokuthi liprinte i-3D yakho ibhetri yemoto yombane? Eli liphupha lokuba inkampani yaseMelika iSakuu- eyayisakuba yiKeraCel - inethemba lokuyiphumeza ekupheleni konyaka wama-2021.
I-GE Aviation itshintshela kwi-Metal AM yamacandelo amane, ukusika iindleko nge-35%
Ngaba imveliso eyongeziweyo yentsimbi ithatha indawo yokuphoswa kwesiko kwicandelo lokuhamba ngenqwelo moya? Ngokuqinisekileyo i-GE ibonakala ngathi icinga njalo. Intsebenziswano phakathi kwe-GE Aviation kunye ne-GE Additive inyanzelise umenzi ukuba atshintshe ekutyalweni kotyalo-mali aye kwimveliso yentsimbi eyongeziweyo (AM) kwiindawo ezine zomoya ezophayo ...
I-OECHSLER I-Rethinks Ski Mask Design kunye ne-3D yokuprinta
Ngokwandayo, iinkampani zibona izibonelelo zokusebenzisa ukushicilelwa kwe3D kwezemidlalo. Enye inkampani ingene eringini. Inkampani yaseJamani i-OECHSLER, egxile kuphuhliso nakwimveliso yeemveliso zobuchwephesha kunye neenkqubo, kutshanje iphethulele ingqalelo yayo kuyilo nakwimveliso ye-ski ...
I-3D eprintiweyo ye-Smart Buoys yokuBeka iliso kwimeko-bume yaseLwandle
Njenganamhla kusuku lwamanzi olusemthethweni lwehlabathi, sithatha ithuba lokukuxelela ngamanzi aselwandle asekwe kwibhetri, eyongeziweyo eyenziweyo, i-smart buoy eyilelwe ukubeka esweni nokuqokelela idatha kubume baselwandle. Ezi ziphuhlisiwe njengenxalenye yeProjekthi yeVithamini yeNgingqi ye2020 ekhokelwa yi-Ulsa ...
Idilesi:Hayi. 1177, Chunlan Road, Jinan, China
Umnxeba:+86 531 55664685